IJapan yaseGenpei War, 1180 - 1185
Indawo: Honshu noKyushu, eJapan
IsiPhumo: I- Minamoto clan ihlala kwaye iphantse igxotha i-Taira; Ixesha likaHeian liphela kunye ne- Kamakura shogunate iqala
Imfazwe yaseGenpei (nayo yadibana ngokuthi "iMfazwe yaseGempei") eJapan yinto yokuqala yokulwa phakathi kwamaqela amakhulu aseSamamura . Nangona kwenzeka malunga neminyaka eyi-1 eyadlulayo, abantu namhlanje bakhumbula amagama kunye nokufezekiswa kwamanye amaqhawe amakhulu alwa kule mpi.
Ngamanye amaxesha xa kuthelekiswa " neMfazwe yeRos ," iMfazwe yaseGenpei yabonisa iintsapho ezimbini ezilwa namandla. Umhlophe wawumbala wendlu kaMinamoto, njengeNdlu yaseYork, ngelixa i-Taira isetyenziselwa ukubomvu njengeLancasters. Nangona kunjalo, iMfazwe yaseGenpei yayingaphambi kweMfazwe yamaRos ngamakhulu amathathu eminyaka. Ukongezelela, iMinamoto neTayra bekulwela ukuthabatha itrone yeJapan; Kunoko, ngamnye wayefuna ukulawula ukulandelana kwemikhosi.
Iimfundo zaseTaira naseMinamoto zazingamagunya athile emva kwesihlalo sobukhosi. Bafuna ukulawula abalawuli ngokuba ngabathandayo abazithandayo bathathe itrone. Ukuphazamiseka kwe-Hogen ka-1156 kunye no-Heiji Ukuphazamiseka kwe-1160, nangona kunjalo, kwakuyi-Taira ephuma phezulu.
Zomibini iintsapho zineentombi ezatshatileyo kumda womkhosi. Nangona kunjalo, emva kokunqoba kweTaira kwiingxaki, uTrara no Kiyomori waba nguMphathiswa welizwe; Ngenxa yoko, wakwazi ukuqinisekisa ukuba unyana wakhe oneminyaka emithathu ubudala waba ngumbusi olandelayo ngoMatshi ka-1180.
Kwakungummiselo we-Emperor Antoku omncinci owayekhokelela iMinamoto ukuba ivukele.
Ngomhla ka-5 kuMeyi, ngo-1180, uMinamoto Yoritomo kunye nomntu okhethwe yilo trone, uNkosana Mochihito, wathumela isimemo semfazwe. Baququzelela iintsapho ze-Samurai ezinxulumene okanye ezihambelanayo neMinamoto, kunye neentloko zemfazwe ezahlukahlukeneyo zama-Buddhist.
Ngo-Juni 15, uMphathiswa u-Kiyomori wayekhuphe incwadi yokubanjwa kwakhe, ngoko uNkosana Mochihito wanyanzelwa ukuba abaleke eKyoto aze afune ukukhusela kwi-monastery yeMi-dera. Ngamaqela amawaka aseTaira ahambela ukuya kwiindwendwe, inkosana kunye namaqhawe angama-300 e-Minamoto agijimela eningizimu ngaseNara, apho abanye oonogada bemfazwe babeza kubomeleza.
Isikhulu esiphelelwe amandla sasimelwe ukuba siyeke ukuphumla, nangona kunjalo, ngoko uMbutho weMinamoto wawubalekela kwiimonki kwindlu yeendwendwe e-Byodo-in. Babenethemba lokuba iidonki ezivela eNara ziya kufika ukuze ziqiniseke ngaphambi kokuba umkhosi waseTaira wenze. Nangona kunjalo, nangona kunjalo, baqhawula amapulangwe ukusuka kwibhuloho kuphela kumlambo ukuya kwi-Byodo-in.
Ekukhanyeni kokuqala ngosuku olulandelayo, ngoJuni 20, umkhosi waseT Taira wahamba ngokusondeza waya kwi-Byodo-in, efihliwe ngumoya. I-Minamoto ngokukhawuleza yakuva i-Taira-cry cry and waphendula ngeyabo. Inkqubela ekhuselekileyo ilandelwa, kunye neentlanethi kunye namaSamamura ukudubula iintolo ngokugqithana komnye. Amajoni aseTaira, ama-Ashikaga, atyhilela umlambo aze axinze ukuhlaselwa. INkosana Mochihito yazama ukubalekela e-Nara kwi-chaos, kodwa iTayra yamthatha yambulala. Abahlali beNara bahamba baya e-Byodo-beva ukuba bephuzile kakhulu ukunceda iMinamoto, babuya.
UMinamoto Yorimasa, okwangoku, wenza i- seppuku yokuqala ye-classic kwimbali, ebhala inkondlo yokufa kwi-war fan-fan, waza wavula isisu sakhe.
Kwakubonakala ngathi ukuvukelwa kweMinamoto kwaye ngoko i-Genpei War iye yaphela ngokukhawuleza. Ngempindezelo, i-Taira yatshitshiswa yatshisa iindwendwe eziye zanikela ngoncedo eMinamoto, zixhela amawaka eemonki zitshisa i-Kofuku-ji kunye ne-Todai-ji e-Nara emhlabathini.
Ubukhokheli benkampani yaseMinamoto badlulela kumntwana oneminyaka engama-33 ubudala, u-Minamoto noYoritomo, owayehlala njengengxowankulu kwindlu yentsapho yaseT Taira. U-Yoritomo kungekudala wathola ukuba kukho intlekele entloko. Waququzelela ezinye iindibano zaseMinamoto zendawo, waza wabalekela eTaira, kodwa walahlekelwa uninzi lomkhosi wakhe omncinci kwi-Battle of Ishibashiyama ngoSeptemba 14.
U-Yoritomo wasinda ebomini bakhe, ebalekela ehlathini kunye nabaxoshe baseTaira ngasemva.
IYoritomo yenze edolophini yaseKamakura, eyayiyintsimi yeSinamoto. Wabiza ngokuqinisekiswa kuzo zonke iintsapho ezidibeneyo kuloo ndawo. Ngomhla kaNovemba 9, 1180, kwi-Battle of the Fujigawa (uMfula iFuji), iMinamoto kunye neentlangano zijongene nomkhosi we-Taira. Ngobunkokeli obubi kunye nemigca yokunikezelwa kwexesha elide, uSira wagqiba ekubeni abuyele eKyoto ngaphandle kokulwa.
I-akhawunti ekhohlakeleyo kunye neyocatshulwayo yezenzakalo zaseFijigawa kwiHeiki Monogatari ithi umhlambi weentaka zamanzi emanzini omlambo waqalisa ukubaleka phakathi kobusuku. Ukuva ukuduma kwamaphiko abo, amasosha aseT Taira athathwe kwaye abaleke, athathe iingaphetha ngaphandle kwemicibisholo okanye athathe iintolo zawo kodwa eshiya iindebe zawo. Iirekhodi zize zithi amabutho aseTaira "ayekhupha izilwanyana ezixhambileyo aze azibethe ukuze zijikeleze ngeenxa zonke kwaye zijikeleze iposi apho zaziboshwe khona."
Naliphi na isizathu esiyinyaniso seTrara ekuphumeni kuyo, kwalandelwa iminyaka emibili ekulweni. IJapan ibhekene noluhlu lwezomlambo kunye nezikhukhula ezichithe ilayisi kunye nezityalo zebhali ngo-1180 no-1181. Iindlala kunye nezifo zachitha ilizwe; qi kelelwa i-100,000. Abantu abaninzi babecala i-Taira, eyayixhele iidonki yatshisa iithempile. Baye bakholelwa ukuba iTayra yayiyehlisele ingqumbo yobuthixo bezenzo zabo, kwaye yaqaphela ukuba amazwe aseMinamoto awazange ahlupheke njengabo abalawulwa yi-Taira.
Ukulwa kwakhona kwaqala kwakhona ngoJulayi ka-1182, kwaye iMigamoto yayinomkhosi omtsha ogama linguYoshhinaka, umzala osisigxina weYoritomo, kodwa obalaseleyo. Njengoko uMinamoto Yoshinaka wancinciza i-Taira kwaye wayeqwalasela ukuhamba eKyoto, uYoritomo wakhula ngokukrakra ngomnqweno womzala wakhe. Wathumela umkhosi malunga no-Yoshinaka entwasahlobo ka-1183, kodwa amacandelo amabini akwazi ukuxoxisana nokuhlala ngaphandle kokulwa.
Ngethamsanqa kubo, i-Taira yayingabikho. Baye baqulunqa umkhosi omkhulu, behamba ngoMeyi 10, 1183, kodwa babengahlambulukanga kangangokuthi ukutya kwabo kwaphela ngeekhilomitha ezili-9 ukusuka empuma yeKyoto. Amagosa ayalela ukuba abasebenzi baphange ukutya njengoko behamba bevela kumaphondo abo, abuye abuyele kwindlala. Oku kubangele ukukhutshwa kwamatyala.
Njengoko bangena kwindawo yaseMinamoto, i-Taira yahlula umkhosi wabo waba yimikhosi emibini. UMinamoto Yoshinaka wakwazi ukukhanga iqela elikhulu kwinqanaba encinci; kwi-Battle of Kurikara, ngokutsho kweengqungquthela, "Amashumi amawaka angamawaka amahashe aseTaira abhubha [a], angcwatywa kule minquba enzulu;
Oku kuya kubonisa ukuguqulwa kweMfazwe yaseGenpei.
I-Kyoto iqhutywe ngokukrakra kwiindaba zeTaira ekutshatyalaliswa kwi-Kurikara. Ngomhla ka-Agasti 14, 1183, i-Taira yabaleka inkunzi. Bathi bathatha kunye nenxalenye yeentsapho zasebukhosini, kubandakanywa nomlawuli wabantwana, kunye neendyebo zesithsaba. Kwiintsuku ezintathu kamva, isebe lika-Yoshinaka lebutho laseMinamoto laya eKyoto, lihamba kunye nomlawuli wangaphambili waseGo-Shirakawa.
IYoritomo yayifutshane njengokuba iTaira yayingumkhonto wakhe wokunqoba. Nangona kunjalo, u-Yoshinaka kungekudala wathola inzondo yabemi baseKyoto, evumela ukuba imikhosi yayo iphangwe kwaye iphangi abantu ngokungakhathaliseki ukuba bezopolitiko. NgoFebruwari ngo-1184, uYoshinaka weva ukuba umkhosi waseYoritomo ufika kwisikhululo ukuba umxoshe, okhokelwa ngumnye umzala wakhe, umntakwabo omncinci waseYoritomo u- Minamoto Yoshitsune . Amadoda kaYoshitsune athumela ngokukhawuleza umkhosi kaYoshinaka. Umfazi kaYoshinaka, umama owaziwayo waseShime uTomoe Gozen , kuthiwa ubalekile emva kokuthatha intloko njenge-trophy. U-Yoshinaka ngokwakhe wayenqunywe ikhanda ngelixa ezama ukuphunyuka ngoFebruwari 21, 1184.
Ukuphela kweMfazwe kunye neMva:
Oko kwasala komkhosi we-Taira othembekileyo wabuyela kwiintliziyo zawo. Kwathatha ixesha elithile iMinamoto ukuba likhuphe. Phantse umnyaka emva kokuba uYoshitsune axoshe umzala wakhe waseKyoto, ngoFebhuwari ka-1185, iMinamoto yambamba iqonga laseTaira kunye ne-capital shift-shift in Yashima.
Ngo-Matshi 24, 1185, imfazwe yokugqibela yemfazwe yaseGenpei yenzeke. Kwakuyimfazwe yamanxweme eStmonoseki Strait, ukulwa kwemini yecala ebizwa ngokuba yi-Battle of Dan-no-ura. UMigamoto noJoshitsune bawisela iinqanawa zeenqanawa ezingama-800, ngelixa uTaira noNoemori bekhokela iinqanawa ze-Taira, ezinamandla ezi-500. I-Taira yayifana nolwazi lwamanzi kunye nemifudlana kule ndawo, ngoko ekuqaleni yayikwazi ukujikeleza iinqanawa ezinkulu ze-Minamoto kunye nokuzibetha nge-shot-long-shot shotsy shots. Izithuthi zivalelwe ukulwa ngesandla, kunye namaSamamu agxuma kwiinqanawa zabachasayo kunye nokulwa neminquba emide neyifutshane. Njengoko imfazwe yayinxibe, ukujika kwamanzi kwanyanzelela i-Taira iinqanawa ngokubhekiselele kunxweme oluxhambileyo, lilandelwa yimikhumbi yeMinamoto.
Xa iinqwelo zemfazwe zaphendukela kubo, ngoko kuthetha, amaninzi ama-Samura yaseSaira agibela elwandle ukuba anxweme kunokuba abulawe yiMinamoto. UMbusi uAnnobhu oneminyaka eyisixhenxe kunye nogogo wakhe nabo baphuma baza bafa. Abantu basekuhlaleni bakholelwa ukuba amaqabana amancinci ahlala eStmonoseki Strait alawulwa yimimoya yamaSamurai yaseTaira; amaqabunga anemifanekiso kwiibhokhwe zazo ezibukeka ubuso bukaSamurai .
Emva kweMfazwe yaseGenpei, iMinamoto Yoritomo yakha i- bakufu yokuqala kwaye yawulawula njenge-Japan shogun yokuqala kwi-capital yakhe eKamakura. I-shogunate yaseKamakura yayingowokuqala kwi-bakufu eyahlukileyo eya kulawula ilizwe ukuya ngowe-1868 xa ubuyisela iMeiji bubuyisela amandla ezopolitiko kubalawuli.
Okumangalisayo kukuba, kwiminyaka emashumi amathathu engama-minamoto ekuphumeleleni kweMinamoto kwi-War Genpei, amandla opolitiko aya kukhishwa kwi-regents ( shikken ) ukusuka kwindlu kaHojo. Yaye babobani na? Ewe, iHojo yayisesebe lekhaya lase Taira.
Arnn, uBarbara L. "Imithetho yaseKhaya yeMfazwe yaseGenpei: Iingcamango zeMbali yaseJapan ephakathi," i- Asian Folklore Studies , 38: 2 (1979), iphe. 1-10.
UConlan, uTomas. Uhlobo Lwemfazwe EJapan-Yekhulu leJapan: Ingxelo kaNomoto Tomoyuki, "I- Journal for Japanese Studies , 25: 2 (1999), iphe. 299-330.
IHolo, uJohn W. I-Cambridge History of Japan, Vol. 3, iCambridge: iCambridge University Press (1990).
Turnbull, uStefano. I Samurai: Imbali yezempi , iOxford: uRoutledge (2013).
Indlela uMnqophiso weVersailles uncedise ngayo ukunyuka kukaHitler
Isihlandlo sabalawuli bamandulo basePersia (i-Modern Iran)
Ngaphezu kweShwe waseMyanmar (eBurma)
UCatherine de Medici: Indlovukazi enamandla yaseFrance ngexesha leMfazwe yeNkolo
Inkalo yesiBini yePunic (218 - 201)
Indlela yokuLawula ingcamango yesiLwimi saseFrentshi 'Aller'
I-Molar Volume Inkcazo
ISikole soMthetho Qalisa kwakhona ifomathi
I-Coppin State University Admissions
'Mr. Magoo '
Ingeniso yokungalingani phakathi kwabasebenzi abancinci
Udliwano-ndlebe noEllen Hopkins
Michel Trudeau Ubulawe
Iimememiselo ezilungileyo malunga neenkampani ze-Amy's Baking
Izikolo ezizimeleyo zingazikhusela njani ukusetyenziswa kakubi kwezeMzimba nokuSondo?
Umkhombandlela oMzekeliso weeNkoma zasendle zazo zonke izakhiwo kunye nobukhulu
Izinto ezenza Ukufundisa Kucelomngeni kwaye Kunzima
5 Iindlela ezilula zokupheka iiflethi zamanzi ahlambulukileyo
I-polysyndeton (isitayela kunye nesingqinisiso)
Iikhowudi zelizwe leOlimpiki
Kutheni sifaka iMithi yeKrisimesi?
Iinguqu ezinkulu kwiWebboyboy Magazine
Inkwenkwezi Yobumnyama kwi-Astrology